Cart - Idaacadaha Shabakadaha
Bogga ugu weyn / Cart
PTT4U waa adeeg raadiye shabakad casri ah oo xirfadlayaal ah. Iyaga oo ku tiirsan ishaarada GSM, idaacadaheena ayaa awoodi doona in ay wada hadlaan iyaga oo aan xadeyn kaladuwan lahayn. Idaacad walba waxay ku shaqeysaa kaarka SIM (kuma jiraan) waxayna isticmaashaa GSM / 3G / 4G noocyada qaarna xitaa waxay la shaqeeyaan signalada WiFi. Tan macnaheedu waa uma baahnid inaad qarash gareyso hanti badan qalabka qaaliga ah ee raadiyaha, soo noqnoqdayaasha, anteenooyinkooda ama meelaha laga kireeyo. Dhammaan qaab-dhismeedka infra-network waxaa bixiya side GSM. Wicitaano gaar ah iyo kooxeed ayaa la heli karaa. Xubnaha kooxdaadu waxay joogi karaan dalal kala duwan oo wali waa la gaari karaa. Isticmaale kasta ayaa iska hubin kara meesha uu ku yaallo (oo ku saleysan astaantooda), u diraan farriimo iyo digniino SOS ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso, waa inaad iibsato raadiyaha shabakadeena, iyadoo kuxiran baahiyahaaga, ku dar kaarka aad doorbideyso kaarka SIM-yada ee raadiyeyaasha (qorshe bille ah oo 500MB ah ayaa kugu filnaan doona) rukumo sanadkii PTT4U adeegga. Waxaad u baahan doontaa hal $ $ 49 oo rukumo ah idaacad kasta. Waana taas! Madax xanuun dambe